I-Phentermine yokwehlisa isisindo: imiphumela emibi nokuphepha - Imininingwane Yezidakamizwa, Imfundo Yezempilo | Julayi 2021
Imfundo Yezempilo, Ukuphila Kahle Izindaba, Wellness Izindaba Umphakathi, Inkampani Izidakamizwa Vs. Umngani Inkampani, Ulwazi Lwezidakamizwa Imfundo Yezempilo, Izindaba Umphakathi Imininingwane Yezidakamizwa, Izindaba Inkampani, Izindaba Imininingwane Yezidakamizwa Ukuphila Kahle Imfundo Yezempilo, Izilwane Ezifuywayo Izilwane Ezifuywayo Inkampani
Main >> Imininingwane Yezidakamizwa, Imfundo Yezempilo >> Ingabe phentermine for kwesisindo ephephile?
Ingabe phentermine for kwesisindo ephephile?
Phentermine kuyinto kadokotela yokudla iphilisi ukuthi suppresses esesuthi. Kubantu abakhuluphele ngokweqile, noma abanesimo sezokwelapha esihlobene nesisindo, lokhu kucindezela inkanuko kungaba yisidakamizwa esiguqula impilo. I-Phentermine iyasebenza, iphephile ukuthatha isikhathi esifushane (izinyanga ezintathu), futhi eshibhile. Kubantu abafuna nje ukungena ku-jean yabo e-skinny, i-phentermine ayisoze yelulekwa noma yanikezwa ngokwemithi.
I-Phentermine yiphilisi endala yokuncipha isisindo esetshenziswa namuhla ukwelapha ukukhuluphala. Futhi ngumuthi ovame kakhulu ukubekelwa le njongo, noma kunezinketho ezintsha emakethe.
Okokuqala, kuyathandwa ngoba kuyasebenza. Ucwaningo luthole ukuthi lungaletha ukulahleka kuka-5% kuye ku-10% wesisindo somzimba ngaphezu kwamasonto ayi-12, lapho sithathwa njengengxenye yohlelo lokwelashwa okubandakanya ukudla okunama-khalori aphansi kanye nokwanda komzimba.
Okwesibili, akubizi, ngokusho UCaroline M. Apovian , MD, uprofesa eBoston University School of Medicine ogxile ku-endocrinology, isifo sikashukela, ukondleka komzimba, kanye nokuphathwa kwesisindo. Izinkampani eziningi zomshuwalense ngeke zikhokhele imithi yokwelashwa kwesisindo noma ukwelashwa, yize kunjalo ucwaningo oluningi eqinisekisa izingozi zezempilo zokukhuluphala. I-Phentermine ingaba yindlela kuphela esebenzayo kubantu abanemali elinganiselwe.
I-Phentermine itholakala ngaphansi kwegama lomkhiqizo i-Adipex-P neLomaira.
Kanjani phentermine umsebenzi kwesisindo?
Phentermine (What is Phentermine?) Is, in lingo medical, anoreorectic, okusho nje ukuthi kunciphisa indlala. Lokhu kwenza, ngokwengxenye, ngokubangela ukukhishwa kwamakhemikhali athile obuchopho endaweni ye-hypothalamus elawula isifiso sokudla, kuchaza UKarl Nadolsky , MD, i-endocrinologist eqinisekiswe yibhodi egxile kwisifo sikashukela, imetabolism, kanye nokukhuluphala eSpectrum Health eGrand Rapids, eMichigan, kanye noFellow of the American College of Endocrinologists (FACE).
ungayilapha kanjani ukhunta kuzinzwane ngeviniga
Ngakho-ke, i-phentermine isiza ukunciphisa isifiso sokudla ngokuthinta uhlelo oluphakathi lwezinzwa.
Kufanele uthathe isikhathi esingakanani phentermine?
I-Phentermine ivunyelwe kuphela ukusetshenziswa kwesikhashana. Ukuphepha nokusebenza isikhathi eside kwe-phentermine akukaze kufundwe — futhi ngeke kube njalo, ngokusho kukaDkt. Apovian, ochaza ukuthi uhlobo locwaningo olunzima oludingekayo lungabiza kakhulu.
Ikhadi lesaphulelo somuthi
Imiphumela emibi ye-Phentermine
Imiphumela emibi emibi ayivamile. Imiphumela emibi kakhulu ye-phentermine ifaka:
ungakanani uvithamini d ozowathatha uma untula
Ukushaya kwenhliziyo okusheshayo
Ukufakwa ezandleni noma ezinyaweni
Akufanele uthathe i-phentermine uma unesifo senhliziyo kufaka phakathi isifo se-valvular senhliziyo, ukwehluleka kwenhliziyo noma umfutho wegazi ophakeme, ukucindezeleka, i-thyroid engasebenzi, noma i-glaucoma, noma ukhulelwe, uzama ukukhulelwa, noma ukuncelisa.
Ingabe phentermine ephephile?
I-Phentermine ngumuthi ovame ukwenziwa kabi. Iphilisi lokudla linegama eliyingozi ngenxa yezizathu ezimbili eziyinhloko:
1. I-Phentermine ngumuthi ofana ne-amphetamine.
Ifana ngokwamakhemikhali nama-amphetamine. Ngakho-ke, i- Ukuphathwa Kwezokudla Nezidakamizwa zase-U.S (I-FDA) ihlukanisa njengesidakamizwa seSheduli IV (okungukuthi, into elawulwa ngokuhlanganyela), ngenxa yokukhathazeka ngokuhlukunyezwa okungaba khona noma ukulutha. UDkt.Nadolsky uveza, phentermine kuyinto hhayi i-amphetamine. I-Phentermine ibonakala iphephile-noma ingasetshenziswa isikhathi eside, uthi. Futhi ekusebenzeni kwami, angikaze ngibone noma ngizwe ngenkinga nge-phentermine.
2. I-Phentermine yayiyingxenye yesidakamizwa esingu-phen-fen.
Ngawo-1990, odokotela banquma i-phentermine nge-fenfluramine noma i-dexfenfluramine, i-phen-fen yokumatanisa. IPhen-fen yaba yisimanga sokulahlekelwa isisindo, kwaze kwathi i-FDA ngo-1997 yathola ukuthi i-fenfluramine ne-dexfenfluramine zazidala izinkinga ezinkulu zenhliziyo futhi zabakhipha emakethe.
Ngingathatha ibuprofen ne-tylenol ngasikhathi sinye
Kumele kuphela thatha i-phentermine noma ukwehlisa isisindo uma ukhuluphele — unenkomba yomzimba (BMI) engaphezulu kwama-30 — noma i-BMI engaphezu kwengu-27 uma unesinye isimo sezempilo esibi esibangelwa ukukhuluphala, njengesifo sikashukela noma umfutho wegazi ophezulu.
Ingozi yangempela ye-phentermine ilele — hhayi emuthini uqobo, kodwa endleleni engaphathwa ngayo kabi. Kukhona okushiwo nguDkt.Nadolsky njengezimboni ze-phentermine ezingahlobene nesibhedlela noma ezinye izinhlelo zezokwelapha ze-fide. Bathengisa i-phentermine ngqo kumakhasimende afuna ukushesha, ukulahleka kwesisindo okulula ngaphandle kokuhlolela izinto ezinobungozi — umkhuba ongekho emthethweni nobungozi.
Lapho kunqunywa njengengxenye yohlelo lokwelashwa jikelele ngudokotela ogxile kakhulu ekukhuluphaleni noma endocrinology futhi ozonikeza ukwengamela ngokucophelela, akunakwenzeka ukuthi i-phentermine izoba yinkinga. Kufanele ihlale iyingxenye yohlelo olulinganiselayo, oluhambisana nezinguquko zempilo ezinjenge:
ikhalori elincishisiwe, ukudla okunomsoco omningi
umsebenzi owandisiwe womzimba
Ngaphandle kwe- lezi izisekelo eziyisisekelo zokunciphisa umzimba okunempilo, kungenzeka uthole emuva wonke amakhilogremu awile ngemuva kokuyeka ukuthatha i-phentermine.
Nge lawa matshe angukhiye, kanye nokuqondisa okufanele kwezokwelapha, i-phentermine, kungasebenza kakhulu njengengxenye yohlelo lokunciphisa isisindo lwesikhashana.
IViagra ingenye yezidakamizwa mbumbulu. Nakhu ukuthi ungagwema kanjani ama-fake ayingozi.
ngaphezulu komuthi wokuphikisana nekhala eligijimayo
I-wellbutrin isebenza kanjani ekuyekeni ukubhema
ukuvimbela kanjani ukutheleleka kwemvubelo lapho uthatha i-flagyl
kuphephile ukuzivocavoca ngomfutho wegazi ophakeme
ushukela wakho kumele ube phezulu kangakanani kusifo sikashukela